အုန်းစိမ်းရည် နဲ့ အသားအရေကျန်းမာရေး - Hello Sayarwon
Update Date ဇွန် 12, 2020 .2mins read
အုန်းစိမ်းရည် ချိုချိုလေးက အမောပြေစေရုံ၊ ရေငတ်ပြေစေရုံပဲလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများသလို အလှအပအတွက်လည်း အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အုန်းစိမ်းရည် ကအသားအရေကို ဘယ်လိုအထောက်အပံ့ပေးလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
အုန်းစိမ်းရည် သောက်ပေးတာက ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးရာရောက်သလို အသားအရေအတွက်လည်း အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အုန်းစိမ်းရည်က်ို သောက်တာအပြင် အုန်းစိမ်းရည် နဲ့ သံပရာရည်ကိုရောပြီး အရေပြားပေါ်မှာလူးပေးတာက အသားအရေကို လန်းဆန်းစေပြီး အကောင်းဆုံး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။ အသားခြောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပျားရည်နည်းနည်းလောက်ထည့်လူးပေးပါ။
အုန်းစိမ်းရည်က အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစက်အပြောက်တွေ၊ အရေးအကြောင်းတွေကို လျော့ပါးစေနိုင်ပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်တင်ပြီး အရေးအကြောင်းကင်းတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အုန်းစိမ်းရည်ကို ဒိန်ချဉ်နဲ့ရောပြီး ပေါင်းတင်ပေးပါ။
အသားအရောင် မညီဘူးဖြစ်နေမယ်။ အစက်အပြောက်တွေ ဖြစ်နေမယ်။ ဒါတွေကို သက်သာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံး ဗီတာမင် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ အုန်းရည်ကို သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။
အုန်းစိမ်းရည်က ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ မှိုပိုးတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရေပြားမှာ ထိခိုက်မိတဲ့ အနာတွေကို ပိုးဝင်မှာစိုးရင် အုန်းရည်နဲ့ ဆေးကြောသန့်စင် ပေးလို့ရပါတယ်။ အုန်းရည်သောက်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံတွေသက်သာစေဖို့ အုန်းရည်မှန်မှန် သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ အုန်းရည်က ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေကို အကောင်းဆုံးတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ အုန်းရည်ထဲကို ပျားရည်နည်းနည်းရောပြီး ဂွမ်းစလေးနဲ့ယူလို့ ဝက်ခြံလေးတွေအပေါ်မှာ တို့ပေးလို့ရပါတယ်။
အရေပြားမှာ အသားခြောက်မှုကနေတဆင့် နှင်းခူဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအရေပြားပြဿနာကင်းစေဖို့ဆိုရင် အုန်းရည်သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရော ကုသဖို့အတွက်ပါ အသုံးတည့်ပါတယ်။
ကြည်လင်တဲ့အသားအရေလေး ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အလွယ်ကူဆုံး နဲ့ အရိုးစင်းဆုံးနည်းလမ်းက အုန်းစိမ်းရည်သောက်တာပါ။ အုန်းရည်ထဲကို သံပရာရည်တစ်စက်နှစ်စက်လောက်ထည့်ပြီးတော့ အသားအရေပေါ်မှာ အသုံးပြုပေးလို့လည်းရပါတယ်။
မှိုပိုးတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေ ကြောင့် အရေပြားမှာ ဓာတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ တော်တော်လေးခံရခက်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် အုန်းရည်သောက်ပေးလို့ရသလို ဓာတ်မတည့်ဖြစ်တဲ့နေရာကို အုန်းရည်လိမ်းပေးလို့လည်းရပါတယ်။
ကြည်လင်ပြီး အနာအဆာကင်းတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အုန်းရည်လေးက အသုံးတည့်မှာ အသေအချာပါပဲ။
What Should You Be Using In Your Skin Care Routine? https://www.skincarebyalana.com/blog/6-fabulous-benefits-of-coconut-water-for-your-skin/ Accessed Date 16 January 2020
10 Research-Backed Benefits Of Coconut Water For Your Health And Skin https://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-of-coconut-water-for-skin-hair-and-health/#gref Accessed Date 16 January 2020
Explore The Benefits Of Coconut Water For Better Skin https://www.rewardme.in/beauty/skin-and-body/10-ways-in-which-coconut-water-helps-your-skin Accessed Date 16 January 2020